विश्वकप छनोटका ११ स्टारमा अटाए कप्तान पारस - Koshi Online
विश्वकप छनोटका ११ स्टारमा अटाए कप्तान पारस
फागुन २९, विराटनगर,
जिम्बाबेमा लागातार तीन खेल हारेर हङकङसगँको खेल जितको नेपालका कप्तान पारस खड्का उत्कृष्ट ११ क्रिकेटरमा परेका छन् । आयोजक अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आइसीसी)ले विश्वकप छनोटको समूह चरणमा ११ क्रिकेटरमा नेपाली खड्का पनि अटाएका हुन् ।
अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आइसीसी)ले समूह चरणका ११ स्टारको नाम सार्वजनिक गरेको हो । जिम्बाब्बेमा लगातार तीन खेल हारेको नेपालले समूह चरणको अन्तिम खेलमा हङकङलाई ५ विकेटले हरायो । पारसले भने १८९ रन बनाए, जसमा दुई अर्धशतक
पनि छ । उनले जिम्बाब्बेविरुद्ध ४०, स्कटल्याण्डविरुद्ध ७५ र अफगानिस्तानविरुद्ध ७५ रन बनाएका थिए । हङकङविरुद्ध भने उनले मात्र ११ रन बनाए ।
खड्काको बारेमा आइसिसीले लेखेको छ ः पारस नेपालका सबभन्दा प्रिय क्रिकेटर हुन् र उनले वर्षौंदेखि आफ्नो प्रसिद्धअनुसारको प्रदर्शन गरेका छन् । नेपालको ब्याटिङ लाइनअपले प्रतियोगितामा राम्रो प्रदर्शन गर्न नसकेको भएपनि पारसले जिम्बाब्वेविरुद्ध ४०, स्कटल्यान्डविरुद्ध ६३ र अफगानिस्तानविरुद्ध ७५ रन बनाए । यी सबै टोलीको बलिङ आक्रमण सशक्त थियो । अन्तिम खेलमा उनी हङकङविरुद्ध चलेनन् र जम्मा ११ रन बनाए तर खुशीको कुरा त्यो खेलमा नेपाल विजयी भयो ।
बुन्डेस लिगाः लिग लिडर डर्टमुण्डको अपराजित यात्रामा लाग्यो पूर्ण विराम !
४ पुष २०७५, बुधबार १०:३१
‘ए’ डिभिजन लिगः पुलिस र बिग्रेड भिड्दै, को बढ्ला अघि ?
४ पुष २०७५, बुधबार ०८:५६
सिटी सेमिफाइनल प्रवेश, पेनाल्टीमा निकाल्यो जित
४ पुष २०७५, बुधबार ०८:३६